नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा - Janakpur Today
नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा
प्रधानमन्त्रीकेपीओलीले भारतकाप्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणको शोभा बढाउन नयाँदिल्लीपुग्दापनि सुख पाएनन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुइअध्यक्षबीचभएको पार्टी एकताकालीन सहमतिले उनको टाउको दुखायो । उनले लामो सुस्केरा फेर्दै नेपाली राजनीतिक संस्कारलाई सरापे । आफनो सरकार चार–पाँचदिनमा नै ढल्ने बक्रोक्तिउच्चारण गरे र स्वदेश फर्किए । उनको अनुपस्थितिमा यो सहमतिको चर्चा किनचल्यो ?किनपुष्पकमलदाहाल प्रचण्डले चर्चा चलाउनयही समय चुने ?उनीकिनअहिले नै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी वा सक्रिय पार्टी अध्यक्षपदमा बिराजमानहुनतम्सिए? यो कुरा खुलेको छैन । नेपालीकांग्रेससंगको सुबिधाजनक सहकार्य पन्छाएर कम्युनिष्ट पार्टी बीचको ब्यापकएकता प्रचण्डको धोको हो । तर, उनको या धोको कहिल्यै पूरा भएको छैन ।
यो अनुमान गर्नु कठिन छैन, प्रचण्डका लागिएमालेसंगको पार्टी एकीकरण सहजभएको छैन । एमालेको आफनै प्रकारको सुबिधाजनक राजनीति छ । नेताहरुमापनित्यहीप्रकारको समझदारी छ । प्रमओलीलाई पदबाट बाहिरगर्ने कुरा झिनो आवाजमाबाहिर निस्कनासाथकामरेड माधव नेपालप्रधानमन्त्रीकाप्रतिरक्षामा सार्वजनिक भाषणमा नै उत्रिए । पूरा एमालेमा बामदेवगौतमबाहेक अरु कुनै नेता प्रचण्डको पक्षमा अघि सरेनन । यो संकेत हालको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका लागि सुखदहोइन । हामीले केही समय अघि पार्टी एकताका समयमा सुनेका थियौ, एमाले र माओवादी पार्टीका नेताकार्यकर्ताहरु एकतामाप्रतिबध्द छन । उनीहरु समाजवादमार्फत समृध्द नेपालको निर्माणमा लागि परेका छन । तर, त्यसो होइन रहेछ ।
एमाले र माओवादीबीचको यो समीकरण दुइ कम्युनिष्ट पार्टीको आबश्यकताथियो कि दुइ नेताहरुको महत्वाकांक्षाको समीकरण थियो ? यो अब खुलस्तभइ सकेको छ । प्रचण्डले आपूm र प्रधानमन्त्रीओलीबीचभएको सहमतिकाबारे कुनै टिप्पणी नगरी आफुभूमिका रहितअध्यक्षका रुपमानिकै ठूलो अप्ठेरोका साथ बसेको स्पष्ट पारेका छन । प्रचण्ड फैंपनिराजनीतिकतनावमादेखिन्छन । एमाले समर्थक कतिपय गैर सरकारी संस्थाकामालिकहरु नै प्रचण्डका बिरुध्द हेगको हौवा फैलाउनब्यस्त रहेका छन । प्रचण्डले जनयुध्दमामारिएका १७हजार नेपालीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नारा लगाईंदैछ । यो समय प्रचण्डका लागिअस्वाभाविक रुपले जटिल बनेकोछ । उनले जसको भरोसा गरेका थिएतीउनको बिरोधमालागेका छन । यसमाशंका छैन ।
नेपालका कम्युनिष्टहरु एउटै बथानमाबस्न सक्दैनन ।
बिगत आठदशकको अनुभवले यही कुरा बताउँछ ।नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमाकतिभंगाला फाटे होलानत्यसको हिसावकिताव छैन । पहिलो जन–आन्दोलनपछि गणेशमान सिंहको प्रेरणाले मनमोहनअधिकारीको नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी र माले पार्टी एक भएकाथिए । त्यो एकताकति पटक बिभाजनतिर गयो ? कसैले भन्न सक्दैन । नेपालका कम्युनिष्टहरु रचनात्मकहिसाबले एकैठाउँमा बस्न सक्दैनन भन्ने भनाइमायथार्थ रहेकोछ । एमाले र माओवादीभित्रकतिधार सलबलाएका छन त्यो पर्यबेक्षकले भन्ने बिषयहोइन ।
एमालेमा प्रमओलीको मूल गूटबाहेक माधव नेपाल, झलनाथखनाल, भीम रावल, घनश्याम भूसाललगायतका नेताहरुको प्रभावशाली गूट छ । नेता प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादीबाट टुटपूmट भएका समूह देशैभरि छन । कृष्णबहादुर महरा पार्टीमा शक्तिशाली मानिन्छन । यतिबेलाउनको शक्तिकुँजिएकोछ ।सभामुख पार्टी राजनीतिमाअलमलिनमिल्दैन ।
नारायणकाजीलाई छाडेर अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजुरेल, बर्षामानपुन, लेखराज भट्ट, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणिहरुअहिले केहीबोल्न सकि रहेका छैनन । नारायणकाजी पार्टी एकताको पक्षमा अटल रहेको बताइन्छ । तर, एमाले र माओवादीदुबै पार्टीले बिभिन्न क्षेत्रका नेताहरुको बिचारको समायोजनमा दृष्टि पुर्याएको देखिदैन । कम्युनिष्ट पार्टी भित्र टुटपूmटको श्रृंखलानचलेको भए मोहन बैद्य, नेत्रबिक्रमचन्दजस्ता पार्टीका नेताहरु माओवादीभित्रै हुन्थे । त्यतिबेलायस्तै हुन्छ भन्न सकिन्थ्यो । नेताहरु अनेकताको शिकार भएको अहिलेको समयमाकार्यकर्ताहरु लथालिंगअवस्थामा देखिएका छन । त्यसैले अहिले नै केहीभन्न सकिदैन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकताअहिले नै संकटमा परी सकेको छैन । यो पार्टी एमाले र माओवादीदुबैको स्वार्थका लागिआबश्यक छ । एमाले वामाओवादीकसले सरकार चलाउने हो र कसले पार्टी चलाउने हो?अबकादिनमा यो बिबादको छिनोफानो होला । तर, बिबादचर्कियो भने पार्टी एकतापनिखतरामा पर्ने देखिन्छ । प्रचण्डलाई सरकार प्रमुखको पद बिना संघर्ष यत्तिकै प्राप्तहोलाभन्नेमा कसैको बिश्वास छैन ।
पार्टी नेतृत्वमाउनलाई स्थापित गरेर एमाले नेताहरु आफनो भबिष्य संदिग्धबनाउनचाहँदैनन । प्रचण्ड अध्यक्षभएभने के होलावानहोला? यो कसैले सोचेको छैन । भनिन्छ, कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण बिश्वासको जगमाहोइन, अबिश्वासको भासमा हुन्छ ।नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई हेर्ने हो भने यहाँजति भाँडा हुन्छ त्यसमात्यत्ति नै बढी ‘चुपुर्को’ हुन्छ । अहिले मिलेकाएमाले र माओवादीसाम्यवादको सैध्दान्तिकआधार बलियो बनाउन एक आपसमा जोडिएका होइनन । यहाँभित्रजति गूट छन त्यति नै सिध्दान्तका कुरा सुनिन्छन ।
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी सामन्तवादीबिचारका सहयात्रीजस्ता देखिन्छन । शक्तिर सत्ताको जति दुरुपयोग यी महावलीहरुबाट हुन्छ त्यति अरु कुनै पार्टीका नेताले गर्दैनन । बर्तमान सरकारलाई नै हेरौं । यसका नाराहरु आकर्षक छन । तर, कार्यान्वयन छैन । सरकार प्रकारान्तरले निषेधमाचल्नखोजेको छ । प्रेसलाई नियमन गर्ने नाउँमा नियन्त्रण गर्ने दुष्प्रयासमा सरकार लागेको छ । सरकारी पक्षकाप्रायः सबै नेताहरुले प्रेस सम्बन्धी बिधेयक संशोधनहुने बताएका छन । तर, त्यो बिधेयकलाई संशोधित रुपमाप्रयोगगर्ने होइन, खारेज नै गर्नु पर्दछ ।
अहिले देखा परेको नेकपाको आन्तरिक अन्तव्र्दन्व्दलामै समय चल्ने देखिन्छ । यो व्दन्व्दमा प्रचण्डको प्रभावले कामगर्दछ कि त्यो प्रभावनिस्तेज हुन्छ उसै भन्न सकिदैन । प्रमओलीले संघीय सत्तामामात्रै होइन, प्रादेशिक सत्तामापनिआफनो पकड जमाउनखोजेको देखिएको छ । प्रादेशिक सरकारलाई संघीय सरकारको इकाइभन्ने प्रधानमन्त्रीबाट जनताले के अपेक्षा राख्ने ?
कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार पाँचबर्ष पूरै चल्न सके राजनीतिक स्थायित्वआएको चर्चा होला । सरकार, सरकार चलाउने पार्टी रउनीहरु भित्रको कटाक्षका कारण यो सरकार पाँचबर्ष नचल्ने सम्भावना बढेकोछ ।
यो समय प्रचण्डका लागिअस्वाभाविक रुपले जटिल बनेकोछ । उनले जसको भरोसा गरेका थिएतीउनको बिरोधमालागेका छन । यसमाशंका छैन । नेपालका कम्युनिष्टहरु एउटै बथानमाबस्न सक्दैनन । बिगत आठदशकको अनुभवले यही कुरा बताउँछ ।नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमाकतिभंगाला फाटे होलानत्यसको हिसावकिताव छैन । पहिलो जन–आन्दोलनपछि गणेशमान सिंहको प्रेरणाले मनमोहनअधिकारीको नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी र माले पार्टी एक भएकाथिए । त्यो एकताकति पटक बिभाजनतिर गयो ? कसैले भन्न सक्दैन । नेपालका कम्युनिष्टहरु रचनात्मकहिसाबले एकैठाउँमा बस्न सक्दैनन भन्ने भनाइमायथार्थ रहेकोछ ।
एमाले र माओवादीभित्रकतिधार सलबलाएका छन त्यो पर्यबेक्षकले भन्ने बिषयहोइन । एमालेमा प्रमओलीको मूल गूटबाहेक माधव नेपाल, झलनाथखनाल, भीम रावल, घनश्याम भूसाललगायतका नेताहरुको प्रभावशाली गूट छ । नेता प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादीबाट टुटपूmट भएका समूह देशैभरि छन । कृष्णबहादुर महरा पार्टीमा शक्तिशाली मानिन्छन । यतिबेलाउनको शक्तिकुँजिएकोछ ।सभामुख पार्टी राजनीतिमाअलमलिनमिल्दैन । नारायणकाजीलाई छाडेर अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजुरेल, बर्षामानपुन, लेखराज भट्ट, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणिहरुअहिले केहीबोल्न सकि रहेका छैनन ।
नारायणकाजी पार्टी एकताको पक्षमा अटल रहेको बताइन्छ । तर, एमाले र माओवादीदुबै पार्टीले बिभिन्न क्षेत्रका नेताहरुको बिचारको समायोजनमा दृष्टि पुर्याएको देखिदैन । कम्युनिष्ट पार्टी भित्र टुटपूmटको श्रृंखलानचलेको भए मोहन बैद्य, नेत्रबिक्रमचन्दजस्ता पार्टीका नेताहरु माओवादीभित्रै हुन्थे । त्यतिबेलायस्तै हुन्छ भन्न सकिन्थ्यो । नेताहरु अनेकताको शिकार भएको अहिलेको समयमाकार्यकर्ताहरु लथालिंगअवस्थामा देखिएका छन । त्यसैले अहिले नै केहीभन्न सकिदैन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकताअहिले नै संकटमा परी सकेको छैन । यो पार्टी एमाले र माओवादीदुबैको स्वार्थका लागिआबश्यक छ । एमाले वामाओवादीकसले सरकार चलाउने हो र कसले पार्टी चलाउने हो?अबकादिनमा यो बिबादको छिनोफानो होला । तर, बिबादचर्कियो भने पार्टी एकतापनिखतरामा पर्ने देखिन्छ ।
प्रचण्डलाई सरकार प्रमुखको पद बिना संघर्ष यत्तिकै प्राप्तहोलाभन्नेमा कसैको बिश्वास छैन । पार्टी नेतृत्वमाउनलाई स्थापित गरेर एमाले नेताहरु आफनो भबिष्य संदिग्धबनाउनचाहँदैनन । प्रचण्ड अध्यक्षभएभने के होलावानहोला? यो कसैले सोचेको छैन । भनिन्छ, कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण बिश्वासको जगमाहोइन, अबिश्वासको भासमा हुन्छ ।नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई हेर्ने हो भने यहाँजति भाँडा हुन्छ त्यसमात्यत्ति नै बढी ‘चुपुर्को’ हुन्छ । अहिले मिलेकाएमाले र माओवादीसाम्यवादको सैध्दान्तिकआधार बलियो बनाउन एक आपसमा जोडिएका होइनन । यहाँभित्रजति गूट छन त्यति नै सिध्दान्तका कुरा सुनिन्छन ।
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी सामन्तवादीबिचारका सहयात्रीजस्ता देखिन्छन । शक्तिर सत्ताको जति दुरुपयोग यी महावलीहरुबाट हुन्छ त्यति अरु कुनै पार्टीका नेताले गर्दैनन । बर्तमान सरकारलाई नै हेरौं । यसका नाराहरु आकर्षक छन । तर, कार्यान्वयन छैन । सरकार प्रकारान्तरले निषेधमाचल्नखोजेको छ । प्रेसलाई नियमन गर्ने नाउँमा नियन्त्रण गर्ने दुष्प्रयासमा सरकार लागेको छ । सरकारी पक्षकाप्रायः सबै नेताहरुले प्रेस सम्बन्धी बिधेयक संशोधनहुने बताएका छन । तर, त्यो बिधेयकलाई संशोधित रुपमाप्रयोगगर्ने होइन, खारेज नै गर्नु पर्दछ । अहिले देखा परेको नेकपाको आन्तरिक अन्तव्र्दन्व्दलामै समय चल्ने देखिन्छ । यो व्दन्व्दमा प्रचण्डको प्रभावले कामगर्दछ कि त्यो प्रभावनिस्तेज हुन्छ उसै भन्न सकिदैन ।
प्रमओलीले संघीय सत्तामामात्रै होइन, प्रादेशिक सत्तामापनिआफनो पकड जमाउनखोजेको देखिएको छ । प्रादेशिक सरकारलाई संघीय सरकारको इकाइभन्ने प्रधानमन्त्रीबाट जनताले के अपेक्षा राख्ने ? कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार पाँचबर्ष पूरै चल्न सके राजनीतिक स्थायित्वआएको चर्चा होला । सरकार, सरकार चलाउने पार्टी रउनीहरु भित्रको कटाक्षका कारण यो सरकार पाँचबर्ष नचल्ने सम्भावना बढेकोछ ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सच्याउन नेता महतोको माग
महोत्तरी : सामुदायिक विद्यालयको अर्बौ मूल्यको जग्गा अतिक्रमित